Ny minisitry ny atitany sy fitsinjaram-pahefana Razafimahefa Tinarivelo no nanolotra ny fanevan’ny faritra ho marika ny fandraisany ny fitantanana ny faritra Vakinankaratra. Nandritra ny lahateny dia nanambara ny governora mpisolo toerana, Rakotomahandry Timothé, fa “afaka miasa avy hatrany ny governora vaovao ary efa mipetrapetraka avokoa ny lamina rehetra ho fanohizana ny asa”. Nanambara kosa ity governora vaovao ity fa “tsy safidy ny fampivoarana fa fanapahan-kevitra, noho izany, dia toetsaina tia fikirizana sy fivelarana no ilaina. Tsy manana fahavalo ny tenako fa ny mosary sy fahantrana ary ny kolikoly no fahavaloko ary izay ahatanteraka an-tsakany sy an-davany ny veliranon’ny filoha no laharam-pahamehana sy tarigetra”. Nanamafy indray ny minisitra Razafimahefa Tinarivelo fa tsy ilaina ny fitavozavozana. Efa mandeha ny asa ary efa misy ny soridalana entina ampandrosoana an’i Madagasikara. Nampatsiahy hatrany izy fa anisan’ny laharam-pahamehana ny fandriampahalemana, ny fisian’ny angovo sy ny rano fisotro madio, ny ady amin’ny kolikoly sy ny fitsarana tsy mitanila. Araka izany dia mila mavitrika amin’ny fanatanterahana ny veliranon’ny filoham-pirenena Rajoelina Andry ny rehetra ary tsy ilaina ny fitavozavozana, hoy hatrany ny minisitra. Ny filohan’ny antenimieram-pirenena, Razanamahasoa Christine, no nitondra ny tso-drano ho an`ity governora vaovao ity nandritra ny lanonana.